တရုတ်အလိုအလျှောက် Professional Tube လေဆာဖြတ်စက်ကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | Guo Hong
အလိုအလျောက် Professional က Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အလိုအလျောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တီဗီလေဆာဖြတ်စက်သည်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တိကျမှုနှင့်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိရိယာဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှု၊ တိကျသောစက်မှုဂီယာနှင့်အပူဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကောင်းမွန်သော man-machine interface သည်လုပ်ဆောင်မှုကို ပို၍ လွယ်ကူလွယ်ကူစေသည်။ ကွက်လပ်အမျိုးမျိုးကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူစွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောတစ်ပိုင်းတစ်စ modular design ကိုအသုံးပြုသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကို double Pneumatic Chuck
မြင့်မားသောထိရောက်မှု: ညှပ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ဗဟိုပြုခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပုံးထက် ၃ ဆပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်း၊ မြင့်မားသောတိကျမှု - ကြီးမားသောနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ညှစ်အားစိုက်ထုတ်ခြင်း၊
မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု - အထူးပြုလုပ်ထားသောပြွန်ပံ့ပိုးမှုသည်ပြွန် sagging နှင့် deformation ကိုတိကျမှန်ကန်ပြီးကြာရှည်စွာရှောင်ရှားနိုင်သည်။
အသစ်သော collimation နှင့် protection မှန်ဘီလူး၊ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှု။
Fiber Laser Cuting Machine နှင့်အတူ Tuble အစုအဝေးတစ်ခုလုံးကိုအစာကျွေးသောကိရိယာထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အသိဉာဏ်ရှိသောပစ္စည်းခွဲခြာခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်းနှင့်ချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်ခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါ။
စတုရန်းပြွန်၏အချင်းဖြတ်တောက်ခြင်း 20 * 20mm-150 * 150mm
မက်စ် လှုပ်ရှားမှုမြန်နှုန်း မိနစ် ၁၀၀
၂။ ဌာနခွဲပိုက်၏အဆုံးမှာကော်လံဖြတ်ထားသောလိုင်းများကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ဌာနခွဲနှင့်အဓိကပိုက်ဝင်ရိုးအတွက်ဗဟိုမှဗဟိုနှင့်ဗဟိုမဟုတ်သောဒေါင်လိုက်လမ်းဆုံအခြေအနေနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်သည်။
4. Can ဖြတ်နျဌာနခှဲပိုက်အဓိကမြို့ပတ်ရထားပိုက်နှင့်အတူ intersected ။
၆။ ပိုက်ပေါ်တွင်စတုရန်းအပေါက်၊ ခါးပုံအပေါက်များနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
7. ပိုက် truncate နိုင်သလား။
ရှေ့သို့ Tube ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ဖိုင်ဘာ optic လေဆာဖြတ်တောက်စက်
ဖိုင်ဘာ optic ပြွန်ရှုး
တစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းပြားနှင့် Tube လေဆာရောင်ခြည် Ma ဖြတ်တောက် ...
အကြီးစား Dube Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်